Izantyala-ntyala zemvula zibashiye bengoding’ ezweni abahlali baseSiqalo – Elitsha
1st June 2014 Mzi VelapiUncategorised 0 Xhosa
Kuthe xa iElitsha iseSiqalo yadibana nelungu le Housing Assembly, umbutho olwela izindlu nenkonzo eziphucukileyo, u Sheryl Van Reenen. Lo ka Van Reenen uye wasidibanisa no sihlalo wasekuhlaleni u Thobile Dyantyi. U Thobile uye wasichazela ngendlela athe wonyula umntana omncinci obetshone phambi kwechibi ebelenzeke phambi kwe cawe. Ngokutsho komzali womntana u Tembisa Xingwana umntana lo ebedlala nabanye phandle, kwaye indlu le ikufutshane necibi eli livele emva kwemvula. U Tembisa uthi uve ngabanye abantwana ukuba umntwana wakhe utshonile, kwaye kobizwa abahlali ukuzokumonyula.
Khayelitsha residents call for better services to fight crime posted on June 18, 2022